Iindaba - Yintoni iZirconia Block?
I-SHT yee-Zirconia eziManyeneyo
I-3D Plus iMultilayer yeZirconia iBhloko
Yintoni iZirconia Block?
Njengoko sonke sisazi ukuba kukho iintlobo ezintathu zezinto ezisetyenziselwa ukubuyiselwa kwamazinyo: i-zirconia block block kunye nezinto zentsimbi. I-Zirconium oxide yenzeka njenge-monoclinic, tetragonal kunye neefom zeekristal. Amacandelo acocekileyo anokuveliswa njengama-cubic kunye / okanye iifom ze-crystal tetragonal. Ukuze uzinze ezi zinto zenziwe ngekristale, izinto ezizinzisayo ezinjenge-magnesium oxide (MgO) okanye i-yttrium oxide (Y2O3) kufuneka zongezwe kwi-ZrO2.
Kutheni ibhloko le-zirconia yeyona mveliso ifanelekileyo emazinyweni ukubuyiselwa?
Masithethe ngobume be-zirconia. Ibhloko le-zirconia yamazinyo lenziwe nge-crystalline oxide form ye-zirconium, kwaye ine-atom yentsimbi kwikristale kodwa ayikaze ijongwe njengesinyithi. Ngenxa yeempawu zayo ezomeleleyo nezingahambelaniyo, oogqirha okanye oogqirha basebenzisa i-zirconia yamazinyo ibhloko kwiindawo ezahlukeneyo zokufakelwa. Nokuba isetyenziselwa ukufakelwa njengoko ithathwa njengezona zinto zinamandla.
Nangona iimveliso ezininzi zisetyenziswa kwishishini lamazinyo, ibhloko le-zirconia yamazinyo ekwabizwa ngokuba yibloko yodongwe yaziwa kakhulu phakathi kwamazinyo kunye nezigulana.
Ezinye izibonelelo zebhloko ye-zirconia yamazinyo:
-Njengoko yenziwe kusetyenziswa uphuhliso lobuchwephesha obuphezulu. Ngobunzima bokuqhekeka okuphezulu, ukwanda kwe-thermal okufana nentsimbi yentsimbi, amandla okugoba aphezulu kakhulu kunye namandla aqine, ukumelana okuphezulu nokunxiba kunye nokubola
-Kuyavunywa neearhente zikazwelonke. Kwakhona, ezi bhloko zifumene kuvavanyo lokucoceka, ukuqinisekisa ukuba kukhuselekile ngokupheleleyo ukuzisebenzisa.
Ibhloko le-zirconia yamazinyo yimveliso ekumgangatho ophezulu, kwaye ikwenza izinyo lomelele ngakumbi kwaye libe lelendalo.
-Ukuba imveliso ifakwe ngaphakathi kwisigulana, iya kuyinika ubomi obuluqilima imveliso.
-Ezinye izibonelelo ezibalulekileyo zale bhloko ye-zirconia yamazinyo ziya kunciphisa ixesha langaphambi kokumisa kunye nokuphucula ukubonwa ngexesha lokudaya.
-Izona zinto zibalulekileyo zale mveliso zinokuba nakho ukubonakala kwakhona kombala wendalo, kwaye zinokufanisa nabuphi na ubungakanani kunye nemilo.
Ixesha Post: Jul-17-2021
101-201, Isakhiwo 4, No.1 yesebe Zhongcheng Life Science Park, No. 14, Zhongxing Road, Xiuxin Community, Ofisi Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen, China.